Kwinqaku elilandelayo ndiza kukwazisa enye yeerom ezintsha zomzuzu, yeqela QissMeIqela labaphuhlisi baseTshayina, sifumana ezi zinto zimangalisayo zeerom nge imbonakalo ebonakalayo kunye nokhathalelo kunye nokusebenza okungalinganiyo.
Ukuba ujonga i-rom enesimbo esahlukileyo kwinto esiqhele ukuyibona, ngakumbi, Umxube weMiui kunye nekhowudi yemithombo yeCyanogen, kodwa ngenkangeleko enonophele ngakumbi kwaye isebenza kwiitheminali ezininzi Samsung, nokuVavanyelwa y Motorola, ungathethi ukukhangela osandokukufumana QissMe Rom.
QissMe ineenguqulelo ezimbini ezifumanekayo kuzo zonke izixhobo ezihambelanayo, inye RC o Phinda umgqatswa kunye entsha beta ivele nje kwiiveki ezimbini ezidlulileyo.
Ukuba udiniwe yiyo yonke iirom ephekiweyo eyenziweyo ukuza kuthi ga ngoku, lixesha lokuzama entsha QissMe Rom, Ngokuqinisekileyo uya kumangaliswa njengoko ndandinjalo xa ndizama okokuqala.
1 Iiterminal ezihambelana neQissMe Rom
2 Iimfuneko zokufaka iQissMe Rom
3 Indlela yofakelo yeQissMe Rom
Iiterminal ezihambelana neQissMe Rom
I-Motorola Defy +
I-Samsung Galaxy SII
Iimfuneko zokufaka iQissMe Rom
Kufuneka sibenayo enye ye iiterminal ezihambelanayo ezikuluhlu oluvela ngasentlaIsixhobo kufuneka sibe isekelwe kunye nokuBuyiswa kwakhona ifakwe ngokuchanekileyo, kunye nebhetri ehlawulisiweyo kwinqanaba layo eliphezulu kunye nokulungiswa kwe-usb okwenziwe kwimenyu yesethingi yesixhobo.
Nje ukuba oku kuqinisekiswe, sinokukhuphela enye yeenguqulelo ezikhoyo kwiwebhusayithi yayo kwaye khuphela ifayile ye-zip ngaphandle kokuvula ngqo kwingcambu ye-sdcard yesiphelo ukuba idanyaze.
Emva koko siya kuqala kwakhona Indlela yokuFumana kwaye siza kufaka i-rom ngendlela eqhelekileyo.
Indlela yofakelo yeQissMe Rom
Kanye ukusuka kwimenyu ephambili yokubuyisela kwimeko yokuqala, into yokuqala esiya kuyenza kukwenza Iisuli ezintathu zobungqongqo:
Ukongeza kwezi zintathu, ukuba undimamile kwaye unebhetri ehlawuliswe kwi-100 x 100, kuyacetyiswa ukuba wenze Sula izibalo zebhethri ukusuka kukhetho Advanced.
Ngoku kuya kufuneka sifake lo mmangaliso wothando ngendlela eqhelekileyo:
Ukuba uwenzile onke amanyathelo njengoko bendikuxelele, uya kuyifaka ngokuchanekileyo ifayile ye- QissMe Rom ukhethe, ngoku kuya kufuneka utshintshe ulwimi oluza kuvela kuqala IChina.
Ukutshintsha ulwimi siza kungena kwifayile ye- imenyu yokuseta kwaye sikhokelwa ziimpawu zemenyu ekhankanyiweyo, siya kungena kwi icon ye A kwaye ukusuka apho siza kukhetha ulwimi olufunwayo.
Okwangoku sinokukhetha kuphela iifayile ze SiNgesi, Kwaye ndilinde Iinguqulelo ezisemthethweni kwiSpanish, kufanelekile ukuyizama ngolwimi lwe- Shakespeare.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, enye indlela yokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod, I-Samsung Galaxy S, i-Rom X-Bean 1.0 yi-XYunknown ye-Android 4.1.1
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-QissMe Rom, iiRom ezinomtsalane zeHTC, Samsung kunye neMotorola
UOliver lopez sitsho
Phendula uOliver Lopez
ukuba yi-ICS 4.0.4
UJoan Jimenez sitsho
Ngokuqinisekileyo yi-ICS? Kungenxa yokuba ndibone iimenyu zeGingerbread kwividiyo abayidlalileyo.
UJoan Jimenez ubhale, ephendula uFranciscoRuizAntequera:
Ukudibanisa ukubeka izimvo
Idilesi ye IP: 186.6.145.217
Ulwimi lweSpanish alunjalo
Sele ndibeke eposini ukuba kuphela ngesiNgesi
Iintloni azilunganga kodwa ulwimi
USteve Villar sitsho
Ndifumene eli phepha elinolwazi oluhle malunga neeRom. http://www.actualtecnologia.com/android-2/ota-permite-la-actualizacion-de-roms/
Responder a Steve Villar
Khuphela iFlip Clock kwisitayile seHTC SENSE